Al-Shabaab oo dhibaato joogto ah ku haysa Xoolo-dhaqato | KEYDMEDIA ONLINE
DIINSOOR, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa mudooyinkii dambe lasoo baxday falal gurracan, oo ay ku dhibaateynayso dad shacab ah oo ku nool Tuulooyin ku yaalla duleedka degmada Diinsoor, ee gobolka Baay.
Illo ku sugan Diinsoor ayaa Keydmedia Online u sheegay in Al-Shabaab barakicin ku hayso dad xoolo-dhaqato ah, oo la daalaan-dhacaya abaaro iyo dhibaatooyin kale, kuwaasoo iyago iyo xoolahooda laha fogeynayo ceelashii Biyaha ay ka cabi jireen.
Al-Shabaab ayaa Subaxnimadii Khamiista Maanta, Saacadu markii ay ahayd 8:00 AM weerar ku qaadey dad xoolo-dhaqato ah oo degan Tuuo lagu magacaabo Dhadhaab Dooyow, oo degmada Diisnoor u jirta qiyaastii 8-KM, halkaasoo ay ku dhaawaceen nin lagu magacaabo Salaad Xasan, oo loo yaqaano [Salaad Joon].
Dhaawaca Salaad Joon waxaa loo qaadey degaanka Gurbaan, oo ku yaalla meel 40-KM dhanka galbeed uga beegan degmada Diinsoor.
Sidoo kale, Shalay Kooxda Al-Shabaab ayaa dad shacab ka afduubtay duleedka Diinsoor, dadkaas oo ahaa xoolaley ayaa la waayay, waxaana ku jira Nin lagu magacaabo Xuseen Xasan Yuusuf. Waxaana lagu amray dadka xoolaleyda inay degaanada ay degan yihiin ka guuraan.
Lama oga sababta iyo ujeedka ay ka leedahay goobaha dadka xoolo-dhaqatada ah ay ka barakicinayso, balse waxay kusoo aadaysaa xili mudooyinkii dambe ay Kooxda weeraro ku qaadaysay degmada Diinsoor.